Munamato Pfungwa Dzenherera | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Yenherera
Kunamata Points Yenherera
Nhasi tichave tichinangana nemunamato zvibodzwa zveNherera.
Nherera ndeavo vane vabereki vakafa. Izwi rekuti nherera rinonyanya kushandiswa kuvana / vadiki. Mune mumwewo maonero, nherera dzinogonawo kuonekwa semunhu ane vabereki vakavasiya zvachose. Inenge 13.2 muzana yenherera yakanyorwa muna 2018. Nherera dzinowanzo kuwanikwa mumatunhu asina kusimukira.
Nherera dzinonzwa marwadzo akafanana neaya ewindow uye kana zvisina kudaro. Marwadzo anoita seasingatsungiririki nekuti mazhinji acho madiki anoona dzimwe shamwari nevabereki vavo. Nherera vana vanonyanya kuenda nepfungwa uye nekushungurudzika mupfungwa, kutanga kubva apo amai / baba vavo vakarwara kusvika pavakazofa.
Kushungurudzika kwepamoyo kunoonekwa munzvimbo yavo vachitanga kutora mabasa akaitirwa vakuru, kana kuita zvinhu izvo vabereki vavo zvavanofanirwa kunge vachivaitira nekuda kwenzvimbo yavo. Vamwe nherera vana vane chinyorwa chezviitiko mundangariro dzavo izvo zvisingatombokanganwike, kunyanya kana vabereki vakafa nenjodzi inotyisa yemotokari kana nechimwe chinhu chisingatarisirwe. Izvi zvinonyatso siya gomba rakakura mumoyo mavo.
Nherera dzinopihwa basa rekuzvichengeta, kupa pekugara nezvimwe zvakakosha zvehupenyu nekuda kwekufa kwevabereki izvo zvinoita kuti zvinyanye kuoma. Huzhinji hwadzo hunove husango uye husina kudzidziswa nekuti vakashaiwa kudzidziswa kwepamba kwakakodzera.
Hunhu hwakashata hunofanirwa kugadziriswa nekukasira iko zvino hwave hunhu hwavo hwemazuva ese, uye ivo hapana chavanoona chakaipa mairi. Iyi nguva yenherera inoita kuti vamwe vana vamhanye nekushungurudzika nekuda kwekufunga kwakanyanya. Vana ava vaiziva kuti zvinhu zvaimbovepo sei vabereki vavo vachiri vapenyu uye vachiona kushanduka kuitika chinhu chakawandisa kutakura. Ehezve, iwo hupenyu hwehupenyu hwavo hwakadzikira zvakanyanya.
Kurasika kwetariro, kusuwa uye kushaya zvekubatsira ndizvo zvimwe zvinoita kuti nherera dzimhanye nekuora mwoyo nekukurumidza. Sezvo pasina mubereki kana mubereki chinhu chinovatungamira nenzira kwayo uye chengetedza zvakawandisa, vadzidzisi muchikoro vanosara nebasa rekuwedzera kuti vaburitse. Vadzidzisi vanofanirwa kudzidziswa maitiro ekuongorora matambudziko epfungwa uye kupiwa hunyanzvi hwekuzvigadzirisa. Mapfupi makosi ekuziva dambudziko uye kuraira kunofanirwa kuve kwakarongedzwa kune vanochengeta uye nevashandi vekusimudzira nharaunda
Nherera dzinofanirwa kuzivikanwa nekuendeswa kunzvimbo dzepedyo dzevasina amai kumusha / kumusha wenherera. Imba yenherera inzvimbo yekugara, kana imba yeboka, yakazvipira kuchengeta nherera nevamwe vana vakaparadzaniswa nemhuri dzavo dzekubereka. Mienzaniso yezvingaite kuti mwana aiswe mumisha inherera yaive iyo pakafa vabereki. Mhuri yekuzvarwa yaishungurudza mwana, kwaive nekushandisa zvinodhaka kana chirwere chepfungwa mumusha wekuzvara waikanganisa mwana, kana vabereki vaifanira kuenda kunoshandira kumwe kunhu uye vakatadza kana kusada kutora mwana.
Asides kubva kumasangano kana boka, munhu wega wega anofanira kuzvitorera pachavo kutarisira vanoshaya uye vasina baba. Muenzaniso wakanaka ndiJobho, ona Jobho 31: 16-18 “Kana ndakaramba zvishuwo zvevarombo kana kurega maziso echirikadzi achineta, 17 dai ndaichengetera chingwa changu ndoga, ndisina kuchigovana nenherera— 18 asi kubva pahuduku hwangu ndakavarera sababa, uye kubva pakuberekwa kwangu, ndakatungamira chirikadzi.
Kubva pamazuva ehudiki hwaJobho, sababa vaizoita, akarera vanoshaya, chirikadzi nenherera. Hunhu hwatinofanira kutevedzera wese wedu.
Minamato yekunamatira nherera
Magwaro anosanganisira mavhesi mazhinji anotaura nherera, saIshe anobvunza maKristu kuti vave nemutsa uye vape nherera. Tichave tichinamata zvinoenderana nemagwaro (izwi raMwari) nekuti Anosimudzira mazwi Ake kupfuura zita rake. Tinofanira kutora iyi minamato zvakakomba.
Baba Tenzi, ndinokutendai nechipo chehupenyu. Ndinokutendai nekuchengetedza hupenyu hwangu kuti muone zuva rakanaka seiri. Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu.
Baba, ndinokutendai nemukana mukuru wekuratidzwa kune chimwe chinhu chakadai. Muchido chenyu ndimo matinorangarira nherera, uye tinotambanudza maoko edu erupo kwavari. Ndinokutendai nekundipa nyasha dzekuti ndiuye kuzonzwisiswa kweshoko iri, Ishe, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba kunherera, tinonamata kuti murambe muchichengeta nherera.
Hosiya 14: 3 "Nokuti mauri nherera dzinowana tsitsi". Ndinokutendai netsitsi inowanikwa mauri. Tinokutendai nekuzorora kwatinako mamuri.
Johani 14:18 “Handingakusiyei muri nherera; Ndichauya kwauri. Tinonamata kuti muuye kunhare yenherera.
Sekutaura kwawakaita, hausi kuzosiya nherera, rega shoko rako riitike muhupenyu hwavo nezita raJesu.
Mapisarema 68: 5, baba venherera, mudziviriri wechirikadzi, ndiye Mwari ari paugaro hwake utsvene. Iwe ndiwe baba wenherera, zviratidze muzita raJesu.
Mapisarema 146: 9 'Jehovha anochengeta mutorwa, uye anotsigira nherera nechirikadzi, asi anovagumbusa nzira.
Baba chengetai nherera muzita raJesu.
Simbisa ipapo nherera mune tsitsi dzako dzisingaperi muzita raJesu.
Nekuti ndakanunura varombo, vaichemera kubatsirwa, nenherera dzisina wekuvabatsira muzita raJesu
Jobho 29:12 Kuchema kwenherera ngakusvike pachigaro chako cheushe nezita raJesu. Nherera hadzina mununuri. Huya ununure ivo kuna Ishe.
Asi imi, iyemi Mwari, munoona kutambudzika kwavanomanikidzwa; munotarira kuchema kwavo mugoibata. Vakatambudzwa vanozvipira kwauri; mubatsiri wenherera. Mapisarema 10:14. Baba tarisai kunherera mufunge kuchema kwavo muzita raJesu
Vabatsirei muvarwire muzita raJesu.
Ita kune mumwe nemumwe wedu maererano netsitsi dzenyu.
Ndatenda, Ishe Jesu nekupindurwa kweminamato, nekuti muzita raJesu rine simba. Ameni.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Nehuipi Kubiridzira Kupokana neChechi
inoteveraKunamata Points Kune Chirikadzi
100 XNUMX Zvakakwana Zvakakwana Pumi dzeMunamato
Kunamata Kunongedzera Kupesana Nezvakaipa Zvinangwa zveVarume